Wafdi ka socdo Jabuuti oo gaaray Hobyo | KEYDMEDIA ONLINE
Wafdi ka socdo Jabuuti oo gaaray Hobyo
Wafdigaan ka socday Jabuuti ayaa xaalad indha indheyn ah ku sameeyay Dekadda qadiimiga ah ee Hobyo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa maalinimadii shalay aheyd Magaalada Hobyo booqasho ku tagay wafdi ka socda hey’adda dekedaha Jabuuti oo uu hogaaminayey guddoomiye ku xigeenka hey’addaas Maxamed Aadan Waaberi (John) oo ay wehliyeen shirkado kale oo ajnabi ah.
Wafdiga Dekedaha Jabuuti ka socday waxaa garoonka diyaaradaha magaalada Hobyo ku soo dhoweeyey madax ka socotay maamulka Galmudug gaar ahaan wasaaradda Dekedda iyo Kaluumaysiga iyo wasaaradda Amniga iyo sidoo kale Guddoomiyaha degmada Hobyo.
Socdaalka madaxda dekedaha Jabuuti ayaa ka danbeeyey booqashadii madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye iyo wafdi uu hogaaminayey ay todobaadkii tagey ku gaareen dalka Jabuuti, iyagoo kulamadii ka dhacay dalka Jabuuti ay labada dhinac uga wadahadleen arrimaha dekedda Hobyo iyo sidii looga faa’idaysan lahaa waaya-aragnimada Hey’adda dekedaha Djibouti.
Wafdiga ayaa booqday xeebta magaalada Hobyo, kuna sameeyey sahan cilmiyeed, waxayna ugu danbayn kulamo la qaateen mas’uuliyiintii Galmudug ee halkaas ku soo dhowaysay ayadoo lala wadaagay taariikhda dekedda dabiiciga ah ee Hobyo iyo daraasado horey loo sameeyey.
Madaxda cusub ee Galmudug ayaa qorshaynaysa In la hirgaliyo dekedda Hobyo sida ugu deg degsan uguna suurtagalsan, waxayna dadaal dheer ugu jiraan sidii loo heli lahaa shirkadihii fulin lahaa dhismaha dekedda Hobyo.